အဆိုပါ WARWICK ROWERS '' INSTAGRAM ကိုကနေဆိုင်းငံ့ခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ရဲ့အကောင့်ယခု BACK UP ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဲ့ကြသည် - သတင်း
အဆိုပါ Warwick Rowers '' Instagram ကိုကနေဆိုင်းငံ့ခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ရဲ့အကောင့်ယခု back up ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဲ့ကြသည်
Warwick Rowers သည်သူတို့၏အကောင့်ကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲယခုအပတ်တနင်္လာနေ့တွင်မမျှော်လင့်ဘဲပိတ်ထားခဲ့သည်။
သူတို့ကထူးဆန်းတဲ့စာမူကိုပယ်ဖျက်တာနဲ့အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိပေမယ့်သူတို့ရဲ့တင်ပို့ချက်အများစုဟာသူတို့ဟာအချည်းနှီးသက်သက်သာသာပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအံ့သြစရာပါ။
ငါတို့သတိပြုမိခဲ့ကြပေလိမ့်မည် @instagram အကောင့်တစ်ခုအားအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအပြီးသတ်ပိတ်ထား ကျွန်ုပ်တို့သည်မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပြီး၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့၏မက်ဆေ့ခ်ျကို ဆက်လက်၍ ဖြန့်ကျက်ရန်စင်မြင့်ပေါ်သို့ပြန်ခွင့်ပြုရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည် @outmagazine https://t.co/9cAcyd5miT
အရာချိန်းတွေ့ app ကိုငါ့အဘို့မှန်သည်
- Warwick Rowers (@warwick_rowers) ဇွန်လ 18, 2018
တွစ်တာတွင်ဖော်ပြထားသည့်ကြေငြာချက်တစ်ခုအရ Warwick Rowers က 'မင်းတို့အများစုသတိထားမိကြတာက၊ ငါတို့ရဲ့ Instagram အကောင့်ကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအမြဲတမ်းပိတ်ထားပြီးပြီ
“ ဒီဟာကအမှားပဲလို့ငါတို့မျှော်လင့်တယ်၊ ငါတို့သတင်းကိုဆက်ပြီးဖြန့်ကျက်ဖို့ပလက်ဖောင်းကိုပြန်ခွင့်ပြုဖို့စောင့်နေတယ်”
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ The Rowers သည်နှစ်ပတ်လည်ပြက္ခဒိန်ကိုဖန်တီးရန်အတွက် Instagram သည်မသင့်လျော်ဟုယူဆသောအရာမှန်သမျှကိုအသေအချာဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤစီမံကိန်းကြောင့်လှေလှော်ခတ်သူများကိုလှူဒါန်းရန်အတွက်သိန်းနှင့်ချီ။ ပေါင်ပေါများသည်။
အဆိုပါ Rowers အထူးသဖြင့်ပရဟိတလုပ်ငန်းဖန်တီးဘို့ပိုက်ဆံရှာဖွေရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြသည် အားကစားမဟာမိတ်များ အားကစားတစ်ခုဖြစ်လာစေရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မတူကွဲပြားမှုမြှင့်တင်ရေးအတွက်ခေါင်းဆောင် လိင်တန်းတူညီမျှမှုနှင့်လိင်တူချစ်သူအခွင့်အရေးများကိုအလေးထားသည်။
ဒီနေ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ ဒီနေ့အဆိပ်သင့်ပုလ်ဥမင်၏အဆုံး၌အလင်းကိုအရင်ကထက် ပို၍ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြောင်းအလဲကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားပြီးဂိမ်းတွင်အသားအရေအချို့ရှိနေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။ #wokerowers
မျှဝေသည် အဆိုပါ Warwick Rowers 10:57 pm တွင် PST မှာမတ်လ 8, 2018 ရက်တွင် (@warwick_rowers)
လှိုင်းတက်သူများသည် Instagram ကိုအများပြည်သူများထံပေးပို့ရန်အတွက်အသုံးပြုခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်။ လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများ၏ဝတ်လစ်စလစ်ပုံများသည်အထူးသဖြင့်အားကစားနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ခံမှုနှင့်ပါ ၀ င်မှုသတင်းကိုဖော်ပြရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုသူတို့မျှော်လင့်ကြသည်။ အရ The Times စတီဖင်ဖရီနှင့် Kylie Minogue ကဲ့သို့ကျော်ကြားသူများကသူတို့၏အားထုတ်မှုများကိုအောင်မြင်စွာထောက်ခံခဲ့သည်။
Instagram's ရပ်ရွာလမ်းညွှန်ချက်များ ပြည်နယ် - 'လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါများနှင့်အပြည့်အ ၀ ဝတ်လစ်စလစ်ခေါင်းပါးခြင်း၏အနီးကပ်အစီအစဉ်များကိုပြသည့်အကြောင်းအရာများ' သည်မသင့်လျော်ဟုမှတ်ယူသည်။
Rowers မှတင်ပြသောအကြောင်းအရာများသည်ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲသည်။ ဤသည်ကအမျိုးသားမီဒီယာအပေါ်အမျိုးသမီးအဝတ်အချည်းစည်းထက်ပိုမိုခိုင်မာသောနှင့်အတူဆက်ဆံခံရအထီးအချည်းစည်းနှင့်ပတ်သက်။ ဝေဖန်မှုလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
Rower လူးကပ်စ Etienne ကပြောကြားခဲ့သည် Out.com :“ ငါတို့မှာမော်ဒယ်တွေကိုမျှမျှတတသဘာဝအရဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်ရှိဖို့လိုတယ်။ ရိတ်နိုင်တဲ့ crotches တွေကသဘာဝမဟုတ်ဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အလှတရားကိုထင်ဟပ်စေတယ်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေဒီသဲလွန်စကိုနာမည်ပေးလိုက်တယ်။ ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်သည်လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာဆံပင်ပါပဲ။
ကျေးဇူးတင်စရာကသူတို့ရဲ့ Instagram အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တာကမနေ့ကရုပ်သိမ်းလိုက်တာပဲ။ လူတိုင်းစိတ်သက်သာရာရစေ၏။
ကျနော်တို့နောက်ကျောပါတယ် @instagram !!! ❤️? ️‍ ?? pic.twitter.com/vHUJaOg9aq
- Warwick Rowers (@warwick_rowers) ဇွန်လ 19, 2018